Sikhungo nokuqeqeshwa Academy of FC Krasnodar ngokuthi "Chetuk" - leli gama komfula omncane, eduze eyakha base uqobo. Emhlabeni olunothile ungakwazi ukucabanga kwezwe othakazelisayo. 10 amakhilomitha kude kumila Krasnodar.
Sergey Nikolaevich Galitsky - uma lo Academy of FC Krasnodar, futhi ngempela le football club ngeke akhona awuwedwa. Lokho nguye ukudala konke okungenhla. Ngo-2008, i-football club "Krasnodar" ethole ngempumelelo ilayisensi, futhi ngo-February 22 wathola ilungelo iqhaza imincintiswano professional kanye tournaments besigaba sesibili. Ngakho-ke, kulolu suku kubhekwa usuku yokuzalwa FC "Krasnodar". Khona-ke wasebenza ithimba uVladimir Volchek, owafika evela eMoscow. Namanje Krasnodar impela amaphuzu amaphuzu 30 futhi emzuliswaneni wokuqala ubuqhawe Russian ezonini "South" eseqedile endaweni yesihlanu, okuyinto enhle kakhulu club abasha.
Academy FC Krasnodar has nhlobo timo letifanele ayadingeka ukuze agcwele ukuqeqeshwa sessions. ithimba izinga okusezingeni amakhosi asebenze ngasesinqeni ukuqeqeshwa, wayekwenza football kwentsha ithimba kanye nentsha amaqembu. Njengoba umdlali, ukuthi kukhona ingxenye izikhungo ezifana zemfundo nokuqeqeshwa emikhulu, njengoba Ibhola Academy of FC "Krasnodar", ogcwele yasensimini utshani aluhlaza (e inani izingcezu ezinhlanu), nalowo insimu encane, kanye ogcwele, ne Turf yokufakelwa futhi izibani kagesi. Okuningi ku base kunensimu ezenziwe ngotshani nezikhwama isihlabathi ikhava ebaleni lokudlala eyenzelwe imidlalo wakhe tennisbol.
Ibhola Academy of FC "Krasnodar" Ubuye konke udinga ukuqinisekisa ukuthi abadlali nabaqeqeshi kungaba uphumule ngokugcwele ngemva ukuqeqeshwa elikhiqizayo. Kubo, iye ngokukhethekile eyakhelwe Cottages ukhululekile. Ngamunye wabo elise ngokukhululekile ngabantu amane. Kodwa ngo-isakhiwo main zitholakala kwezinye izingxenye ze-eziyinkimbinkimbi. Gymnastic, ikamelo ukuqina, pool, kubhavu ashisayo, ama-sauna ezimbili, eydijithali amakamelo, ukudla, ezempilo ukuzilibazisa isikhungo, kanye ihholo, iphatha izifundo theory. Kukhona ejimini ubudala. Akunakwenzeka ukuba uqaphele khona yokulungisa izitolo kanye, yebo, yokupaka, okuyinto angazamukela izimoto 40.
FC "Krasnodar" - club esiyingqayizivele. Kusukela ngosuku lokuqala kakhulu isisekelo salo, yena waba eduze waziphatha nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Futhi kwaba isinqumo esifanele, ngoba namuhla ke ingenye enamandla kakhulu Russian football elisekela. Ngo-May 5 th 2008, unyaka Krasnodar engena "Chetuk". Kodwa kuphela ngo-2009, ukwakhiwa kanye kabusha imisebenzi aphethwe ngasesinqeni, seziqedile. Kwenziwa umsebenzi wokunyathelisa i omkhulu ngempela. Kuze kube manje, "Chetuk" - ingenye best ukuqeqeshwa football elisekela eYurophu. Mangisho ukuthi lesi "Krasnodar" akagcinanga lapho. Ngonyaka ka-2008, ehlobo ekuqaleni, ziye zenza kwaba Training Centre Reserve. Okokuqala, abafundi bafunde kusukela phansi, "Krasnodar" imikhakha, kodwa ngo-2010, kwaqalwa umsebenzi we- ekwakheni isakhiwo zezingane football Academy. Ngo-2011, unyaka ukwakhiwa yayo, yaqedwa ukwakhiwa. Futhi manje Ibhola Academy of FC "Krasnodar" ingenye impumelelo eRussia nase-Europe.
Minyaka yonke, abadlali abancane beze indawo has isihloko esilandelayo: Wezingane Academy FC "Krasnodar". Izibuyekezo kule base ukuqeqeshwa wokubonga, esiqondile, ngisho nomdlandla, futhi ngokufanelekile ngakho. Phela, abaqeqeshi benza omningi umzamo ukugxilisa abadlali abasha bonke amakhono adingekayo ukuze professional game. Imisebenzi yezingane football Academy ngokusemthethweni kuvunywe ngokomthetho. Sinazo ilayisensi efanele futhi Isitifiketi sokugunyazwa, kanye nezinye iziqondiso, okukuvumela emfundweni yezingane. Kuze kube manje, FC Krasnodar Academy lifundisa ubuciko football ezingaphezu kuka abafundi 1,100, futhi bonke abadlali onengxenye emncintiswaneni, esizolokhu Uzidumi Union. Ngamanye tournaments football abadlali abasha futhi ngempela abathintekayo. I-Academy izitimela ochwepheshe, futhi libonisa indlela evusa ezingeni labafundi ukuqeqeshwa.
Indzaba "Njengoba ngake basiza umama" izingane esikoleni